DDS Itoobiya oo gurmadka u fidinaya dadka ku waxyeeloobay masiibadii xeebaha Puntalnd – Radio Daljir
DDS Itoobiya oo gurmadka u fidinaya dadka ku waxyeeloobay masiibadii xeebaha Puntalnd
Nofeembar 13, 2013 7:23 b 0
Jig jiga, November 13, 2013 – Dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa maanta shaaciyey in ay ka xun yihiin khasaaraha soo gaaray dadka ku sugan xeebaha iyo dhulka buuralayda ah ee Puntland, waxay ku tilmaameen masiibo u baahan gurmad iyo wax ka qabasho.
Madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin in ay garab istaagaan walaalaha reer Puntland ee dhibaatadu soo gaartay, isagoo sheegay in khasaaraha ka dhashay masiibada duufaanta ah ay dareensan.
War-murtiyeed ka soo baxay xafiiska madaxtooyada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa lagu yiri ?”Xukuumada DDSI ayaa ilaahay uga baryaysa in uu Samir iyo Iimaan ka siiyo shacabkii ku geeriyooday masiibadan qoysaskii iyo ehelkii ay ka baxeen.”
Qoraalka waxaa si gaar ah loogu xusay in madaxda iyo shacabka dowlad deegaanka Soomaalida ay kaalmo la garab taagan yihiin bulshada Puntland ee dhibaatadu la soo deristay, haatan waxaa Jig jiga ka bilowday aruurinta raashin iyo dhaqaale loogu talo-galay gurmad ahaan in loo gaarsiiyo dadka dhibaatadu la soo deristay, culimada ayaa howsha bilaabay.
Dowlad deegaanka ayaa sheegay in ay gurmadka oo noocyo badan leh si toos ah u gaarsiin doonaan meelaha ay dhibaatada ugu daran ka jirto ee haatan ay ku qul-qulayaan gurmadyada kala duwan ee masiibadu saamaysay.
Madaxweynaha Puntland Dr. Faroole ayaa shalay ku baaqay in loo baahan yahay in gacan isku mid ah loo fidiyo dadka dhibaatadu la soo deristay, waxaa uu bulshada Soomaaliyeed iyo beesha caalamka intaba ka codsaday in ay masiibada dhacday saamaynteeda wax kala qabtaan.
Roobabka oo khasaaro naf iyo maalba leh ka gaystay deegaano ka tirsan gobolka Sanaag (Dhegeyso)